အားဆေးသောက်တဲ့အခါ ... | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ပုံမှန်လူတွေမှာ အားဆေးတွေကို သောက်သင့်၊ မသောက်သင့်ဆိုတာကတော့ အခုထိ အချေအတင် ပြောနေကြတုန်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာ ကလေးအာရုံကြောစနစ်ကိုကောင်းစေဖို့ ဖောလစ်အက်ဆစ် သောက်ပေးရတာ၊ ဗီတာမင်အေနဲ့ သံဓာတ်ချို့တဲ့လေ့ရှိတဲ့ ကလေးတွေမှာ အားဆေးသောက်တာမျိုးကတော့ ရှိရမှာပေါ့နော်။
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ် အာဟာရဓာတ်တွေကို အစားအသောက်ကနေ ရယူတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အစားအသောက် အစုံမစားသူတွေ၊ အစားရှောင်သူတွေ၊ အစားမစားနိုင်သူတွေမှာတော့ အာဟာရဓာတ် ချို့တဲ့နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာတော့ လိုအပ်နေတဲ့ အာဟာရဓာတ်အတွက် အားဆေးသောက်ပေးရမှာပေါ့။ ဒီလိုသောက်တဲ့အခါမှာ စုပ်ယူမှုအားကောင်းစေဖို့ ဘယ်လိုသောက်ရမယ်၊ ဘယ်အချိန် သောက်ရမယ်ဆိုတာက အရေးကြီးလာပါတယ်။
>> ဘယ်အချိန်မှာ သောက်ရမလဲ?
မနက်မှာ သောက်ရမလား၊ ညမှာ သောက်ရမလားဆိုတာကတော့ အခုထိဒွိဟဖြစ်တုန်းပါပဲ။ သီအိုရီတစ်ခုကတော့ တစ်နေကုန် အစားအသောက်ကနေ အာဟာရဓာတ်ကို ရနေတာမို့ ညဘက်မှ အားဆေးသောက်ခြင်းဖြင့် ညအိပ်နေတုန်းတောက်လျှောက်ကို အာဟာရဓာတ်တွေ ကောင်းကောင်းစုပ်ယူနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘော်စတွန်မြို့ တက်ဖ်စ်တက္ကသိုလ် အာဟာရပညာပရော်ဖက်ဆာရဲ့ အဆိုအရတော့ ညအိပ်ချိန်မှာ အစာစုပ်ယူမှု အားနည်းသွားတဲ့အတွက် ညဘက် မသောက်သင့်ဘူးလို့ ဆိုပြန်ပါတယ်။
NOWS food ရဲ့ အာဟာရပညာရှင်ကလည်း multivitamin တွေနဲ့ ဗီတာမင်ဘီဓာတ်ပေါင်းတွေကို မနက်ပိုင်းမှာ သောက်သင့်ပါတယ်တဲ့။ ဗီတာမင်ဘီဓာတ်ပေါင်းဟာ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်နဲ့ ဦးနှောက်ကို လှုံ့ဆော်တာမို့ ညဘက်နားနေချိန်မှာ မသောက်သင့်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
အဓိက,ကတော့ သောက်ဖို့ မမေ့ဖို့ပါပဲ။ ကော်ဖီဖျော်စက်ဘေးမှာ ဆေးဘူးကိုထားခြင်းဖြင့် ကော်ဖီသောက်တိုင်း ဆေးသောက်ဖို့ သတိရမှာပါ။ နေ့လယ်ထမင်းစားချိန်မှာ သောက်တတ်တယ်ဆိုရင် ထမင်းချိုင့်ထဲ ထည့်ထားပါ။ ဒါဆို ထမင်းစားတိုင်း ဆေးသောက်ဖို့ သတိရမှာပါ။
>> အစာနဲ့ သောက်ရမလား၊ အစာနဲ့ ဝေးပြီး သောက်ရမလား?
အားဆေးအများစုဟာ အစာနဲ့အတူသောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှ အစာအိမ်ကို မထိခိုက်စေတဲ့အပြင် ချေဖျက်မှု၊ စုပ်ယူမှုကို အားကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ တချို့ဆေးတွေကျတော့လည်း အစာနဲ့ဝေးဝေးသောက်ဖို့ လိုပါတယ်။
သံဓာတ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်နဲ့ ငါးကြီးဆီတွေဟာ အစာအိမ်ကို ထိခိုက်နိုင်တာမို့ အစာနဲ့ သောက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အဆီမှာ ပျော်ဝင်တဲ့ ဗီတာမင်အေ၊ ဒီ၊ အီး၊ ကေနဲ့ ဒီ ဗီတာမင်တွေပါနေတဲ့အားဆေးတွေကို အစာနဲ့ အတူတူသောက်မှ စုပ်ယူမှုအားကောင်းမှာပါ။ အထူးသဖြင့် အဆီနည်းနည်းပါတဲ့ အစားအသောက်တွေနဲ့ပေါ့။
Probitic ဆိုတဲ့ ကောင်းတဲ့ဘက်တီးရီးယား အားဖြည့်ဆေးတွေကိုလည်း အစာမစားခင် မိနစ် ၃၀ အလိုကတည်းက သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
အားဆေးကို ကောင်းကောင်း စုပ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် ရေကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးသောက်ရင် ရေဖန်ခွက်တစ်ခွက်အပြည့်နဲ့သာ မျောချလိုက်ပါ။
>> ပေါင်းသောက်ရင် ပိုကောင်းတဲ့ဆေးများ
တချို့ဆေးတွေက ပေါင်းသောက်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ဥပမာ - ကယ်လ်စီယမ်စုပ်ယူမှု ကောင်းစေဖို့ ဗီတာမင်ဒီ လိုအပ်သလို သံဓာတ်စုပ်ယူမှုကောင်းဖို့အတွက် ဗီတာမင်စီ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဥပမာအားဖြင့် သံဓာတ်အားဆေးကို လိမ္မော်သီးဖျော်ရည်လေးနဲ့ သောက်ပေးတာမျိုး လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
>> ခွဲသောက်ရင် ပိုကောင်းတဲ့ဆေးများ
ကယ်လ်စီယမ်ဟာ ဇင့်၊ သံဓာတ်နဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်စုပ်ယူမှုကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကယ်လ်စီယမ်ကို သံဓာတ်အားဆေးတို့၊ မာတီဗီတာမင်အားဆေးတို့နဲ့ ခွဲသောက်ပေးပါ။ ဒါ့အပြင် ကယ်လ်စီယမ်ကို တစ်ခါသောက်ရင် ၆၀၀ မီလီဂရမ်အောက် သောက်ပေးခြင်းက စုပ်ယူမှုကို ပိုကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီ့ထက်ပိုသောက်ရမယ်ဆိုရင်လည်း မနက်၊ ည ခွဲသောက်ပေးပါ။
အမျှင်ဓာတ်ပါတဲ့ အစားအသောက်တွေ၊ အားဆေးတွေဟာလည်း ဆေးစုပ်ယူမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတာမို့ ခြားသောက်သင့်ပါတယ်။
>> သောက်သင့်တဲ့အချိန်တွေကို ဥပမာနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် -
မနက်စာနဲ့ အတူသောက်သင့်တဲ့ဆေးတွေ -
● မာတီဗီတာမင်၊ ဖောလစ်အက်ဆစ်
● အိုမီဂါ ၃
● ပရိုဘိုင်အိုးတစ် အူအကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား ဖြည့်စွက်ဆေး
ဒီလို အချိန်အလိုက် သောက်ပေးဖို့ အဆင်မပြေရင်လည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး။ မာတီဗီတာမင်နဲ့ အဆီမှာပျော်ဝင်တဲ့ ဗီတာမင် အေ၊ ဒီ၊ အီး၊ ကေတို့ကို အဆီနည်းနည်းပါတဲ့ အစားအသောက်နဲ့ စားပေးမယ်၊ ကယ်လ်စီယမ်နဲ့သံဓာတ်ကို ခွဲသောက်ပေးမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အားဆေးတွေ သောက်တာထက်စာရင် အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအသောက်တွေ စားပေးတာက အကောင်းဆုံးပါပဲနော်။